Gịnị bụ vitamin D kacha mma ị ga-eri? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Vitamin d na-agbakwunye nri niile - otu esi edozi ya
Gịnị bụ vitamin D kacha mma ị ga-eri?
Kedu ụdịvitamin D.bukacha mma? Na-atụ aro ụdịvitamin D.buvitamin D3ma ọ bụ cholecalciferol. Nke a bụ ụdị okikevitamin D.na ahụ gị na-eme site na ìhè anyanwụ.12.17.2009
Ugbu a ConsumerLabjust agwụchaala ihe mgbakwunye vitamin D.
Anyị anwalela ọtụtụ narị ihe mgbakwunye vitamin D n'ime afọ ndị gara aga. Anyị na-anwale ụdị ngwaahịa a na ụdị nri mgbakwunye dị iche iche kemgbe 1999 wee debe ha na ConsumerLab.com.
Aga m agwa gị ihe vitamin D na-eme, ịchọrọ ya, ego ole ka ị kwesịrị ị were, ụdị ị kwesịrị ịnara - nnoo ofe na mkpụrụ, ngwa ngwa, banyere vitamin D, vitamin D dị mkpa? Ọ bụ ezigbo ihe bara uru. Ikwesiri inweta vitamin D ma site na anwu ma obu site na nri ma obu ihe mgbakwunye. Ikwesiri inwe ihe ruru 600 I U kwa ubochi; ọ bụrụ na ị gafeela afọ 70, ọ bụ 800 IU; maka ụmụ ọhụrụ n'okpuru otu afọ ọ bụ 400 IU.
Ugbu a vitamin D dị mkpa n'ihi na, n'otu aka, ọ dị mkpa maka ahụike ọkpụkpụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịnọghị n ’ọkwa kwesịrị ekwesị, ọkpụkpụ gị esighi ike; ọ na - enyere gị aka ịbanye na iji calcium. Nke abuo, ọ na-ebelata ihe ize ndụ nke nkụchi obi na ọrịa strok.
N'ezie ọ na-ebelata ohere nke ụkwara ume ọkụ na nfụkasị na ụdị mbufụt dị iche iche. Ndị mmadụ na-enweta ezigbo nri nke vitamin D na-adịkarị ogologo ndụ karịa ndị na-enweghị ma ọ bụ ndị nwere oke ụzọ. Ọ bụghị naanị na anyị nwalere mgbakwunye nri - na vitamin D - kemgbe ọtụtụ afọ, anyị esorola akwụkwọ ndị ahụ nke ọma.
A na-enwe nnukwu arụmụka gbasara ego ole a ga-ewe, gịnị bụ ogo ọbara ziri ezi yana mgbe ị ga-ebelata ya, ihe ị hụrụ bụ na inweta obere ma ọ bụ oke abụghị ihe dị mma. N’etiti ị chọrọ ịnọ, ebe ahụ dị ụtọ dịkwa ihe dịka 25 ruo 35 nanogram kwa ml. Ga-ahụ ya na nyocha ọbara gị.
Ọfọn, enwere ọtụtụ mkparịta ụka banyere ebe mpaghara a kwesịrị ịdị: Enwere m ike ịgwa gị mgbe nyochachara ọmụmụ na nyocha anyị niile na-abịaghachi na nke a bụ ezigbo ezigbo ebe. N'ezie ihe ọ bụla karịrị 20 ng kwa ml - ma ọ bụ n nanogram kwa ml - dị mma. Chọghị ịgafe 39 ma ọ bụ 40.
Kedu ka ị ga-esi ruo ọkwa a mgbe ị na-anọghị? Ọchịchị isi mkpịsị aka bụ isi 100 IU kwa otu nanogram kwa millilita. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ị gbagote otu isi, ịchọrọ ihe dị ka 100 IU karịa ihe ị na-enweta n'oge na-adịbeghị anya kwa ụbọchị. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga site na 20 ruo 25 ị ga-achọ 500 IU.
Ọfọn, ọ bụrụ na ị buru oke ibu, vitamin D bụ abụba na-agbaze abụba, ya mere a ga-agbaji ya karịa abụba; You nwere ike ịba okpukpu abụọ karịa ya ka ị nwee ike were 1,000 IU karịa 500. Youchọghị ị vitaminụ nnukwu vitamin D. Ha maara na ụlọ ọrụ na-erere gị ọtụtụ tọn ịchọrọ iji nweta.
E nwere ngwaahịa nwere 400 IU, 600, otu puku, puku abụọ, puku ise. Anyị nwalere otu nke nwere 10,000. Aga m ezere ị consumụ nnukwu vitamin D, n'eziokwu, oke nkwụsịtụ bụ 4,000 IU.
Mana n’ezie, ọ bụrụ na ị na-ewere ihe ruru otu puku ma ọ bụ puku abụọ kwa ụbọchị, nke ahụ enweghị nsogbu. Ọfọn, ọ bụrụ na ịchọghị ya, ị gafeela iri abụọ na ise ma ọ bụ iri atọ na otu milimita, agaghị m echegbu onwe gị ị vitaminụ vitamin D n'ihi na ịchọghị itinye onwe gị n'ihe egwu ma ọ bụ belata uru ị na-enweta na-enweta site na vitamin D., ma ị nwere ike nweta vitamin D zuru oke site na anyanwụ - minit 15 kwa ụbọchị na aka, ogwe aka, na ihu zuru oke, ị nwere ike inweta ya site na nri dị iche iche na ngwaahịa mmiri ara ehi ewusiri ike na vitamin D.
Ugbu a, ụdị ngwaahịa ndị dị na ya dị, site na mmiri mmiri na mbadamba na chịngọm. Mmiri mmiri na-amasị m. Aga m akwado iji mmiri mmiri mee ihe abụọ.
Karịsịa, ha dị ezigbo mma. You nwere ike ịhazigharị ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya na ezinụlọ gị - ị maara na nwa gị chọrọ obere ego, ịchọrọ nnukwu ego, ị nwere ike ịme nke a na mmiri mmiri dabere na ọnụọgụ nke ị nwere Nke abụọ, ma karịa , vitamin D, nke nwere abụba na-abụ abụba, na-adị mma karị ma ọ bụrụ na etinye ya nri nwere abụba na mmanụ. Maka na ọ bụrụ n ’ewere ya nri nwere abụba na mmanụ, ọ na - akpali ihe nzuzo nke bile n’ime obere eriri afọ gị.
Bile a na-agbari abụba ma nyere gị aka ịmịkọrọ vitamin ndị nwere ike ịmịnye abụba nke ọma - ị nwere ike nweta vitamin D 30 ruo 50 karịa ma ọ bụrụ na ị were ya nri nke nwere abụba na mmanụ karịa ma ọ bụrụ na ị ga-eji iko mmiri were ya. Ma ị nwere ike iji nwayọ were ya tupu nri ma ọ bụ n'oge nri, obere oge ị richara ya. Na nkenke, nke ahụ bụ vitamin D.
Reallychọrọ n'ezie ijide n'aka na ị na-ezuru ya. Mgbe ị zuru, a ,ụla ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ naghị, were mgbakwunye ma ọ bụ tinye ya na nri gị, ma ọ bụ nweta anwụ.
Nwere ike ịgụ akụkọ anyị ebe anyị nwalere ma nyochaa ngwaahịa ndị a niile. O di nwute, obughi ha nile nwere vitamin D nke ekwesiri inwe. Yabụ ịchọrọ ijide n'aka na ị na-azụ ezigbo ngwaahịa na ọ bụ ya mere anyị ji anwale ngwaahịa ndị a ma biputere akụkọ ndị a biputere ebe ị hụrụ isiokwu a.
Nke a bụ Dr. Ọnwụ nke Cooperman si ConsumerLab.com.
Kedu ihe vitamin D kasị dị nchebe ị toụ?
Ọ bụ ezie na 4,000 IU (250 mcg) ka edobere dịka ego kachasịvitamin D.ị nwere ikenaran'enweghị nsogbu, ọtụtụ ọmụmụ egosiwo na iburu 10,000 IU (250 mcg) kwa ụbọchị agaghị akpata mmetụta (37, 38). Nke ahụ kwuru, ịnara ihe karịrị 4,000 IU nwere ike ọ nweghị uru ọzọ.08.10.2017
Kedu ihe dị iche na vitamin D na ọgwụ vitamin D?
Enweghị ndị dị mkpaọdịiche dị n'etiti vitamin Dsoftgels vs. mbadamba ma e wezụga na softgels bụ ihe ọma na-eloda, ọ na o na-ekpuchi ihe nzu dị ụtọ karịa ọgwụ.VitaminD2 50,000 nkeji chọrọ andenye ọgwụOtú ọ dị,vitamin D3Ngalaba 50,000 anaghị achọ otu.08.03.2021
Kedu mgbe m kwesịrị ị vitaminụ vitamin D n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị?
Mostzọ kachasị mkpa dị mkpavitamin D.n'ime usoro gi nanaraya anọgide iji hụ kacha arụmọrụ. Gbalịana-ewereya n'akụkụ nri ụtụtụ ma ọ bụ nri nri ụra - ọ bụrụhaala na ọ naghị egbochi ụra gị.Ọkt 23 2018
na-ewu ewu tarts ike
Vitamin D dị iche na ọtụtụ vitamin. N'ezie, ọ bụ hormone steroid sitere na cholesterol mgbe ahụ gị na-ahụ anyanwụ. Ọ bụ vitamin nwere ike ịgbakwunye abụba, nke pụtara na ọ na-agbaze na abụba na mmanụ ma na-echekarị ya n'ime ahụ gị ogologo oge.
Ha nwere D3: cholecalciferol (nke a hụrụ na azụ mmanu na nkochi ime akwa na ị nwere D2: Ergocalciferol (nke a hụrụ na ụfọdụ osisi na ero). D3 na-arụ ọrụ nke ọma na ịbawanye ogo gị vitamin D, yabụ ọ ga-abụ nke ahụ Agaghị elekwasị anya na ya Ajụjụ buru ibu onye ọ bụla nọ n'ụlọ ahịa ọgwụ na-ajụ m Nke a vitamin nwere mmasị itinye bụ, enwere m ike ịnweta ya site na anyanwụ? Ọfọn, ọ dabere na anwụ, dị ka LA ebe m nọ ugbu a, ị enwere ike inweta vitamin D niile ịchọrọ ma ọ bụrụ na ị na-elele oge ole na ole Izu.
Ma buru n'uche na ọ dabere. Ọtụtụ ụbọchị n’izu: nkeji iri na ise nke anyanwụ ezuola maka onye nwere akpụkpọ anụ ọkụ (n’ihi obere melanin nke na-ekpughere anyanwụ) ruo awa ole na ole onye nwere anụ ahụ gbara ọchịchịrị (onye, ​​sịnụ, nwere ọtụtụ melanin ma nweta obere ihu anyanwụ) ). Naanị cheta, ọ bụrụ na ị kpughee ihu gị na aka gị, ị nwere ike ị gaghị ezu, mana echefula: oge ​​ikpughe gị kwesịrị ịdabere n'otú akpụkpọ gị si emetụta ìhè anyanwụ.
Nke a bụ n'ihi na anwụ na-ebute ịka nká nke anụ ahụ ma nwee ike ịbawanye ohere ị nwere kansa kansa. Were sunscreen soro gị mgbe ị na-apụ iji banye ụfọdụ D ma ọ bụrụ na ịnọ n’èzí karịa nkeji 15 ruo 20. Mgbe ị nọ ya, echefula ile edemede m na sunscreen maka etu ị ga-esi kpuchido onwe gị site na ntutu anwụ ma see bọtịnụ dị n'okpuru.
Ebe ọ bụ na a na-echekwa vitamin D n’ime ahụ gị ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa, naanị ihe ị ga-eme bụ iji nweta anwụ anwụ naanị ka ịdebe vitamin D gị n’ọbara gị, yabụ na ọ dịghị mkpa ịnọdụ ala n’ihu anyanwụ kwa ụbọchị, ọkachasị ma ị nọ na-ewere ihe mgbakwunye na-edozi ahụ. N'ikwu ya, ọtụtụ ndị enweghị ohere ịnweta anwụ, n'ihi na ọtụtụ oge vitamin D ụkọ bụ eziokwu, ọkachasị ndị okenye, n'ihi na akpụkpọ ahụ ha siri ike ịmịpụta vitamin D ọbụlagodi mgbe ekpughere ya na akụrụ ha enweghi ike ịmịkọrọ vitamin D na-agbanwe ụdị ọrụ ya, nke nwere ike ibute osteoporosis na ihe egwu nke ọdịda. N'ezie, ndị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ, na-eyi uwe buru ibu, na-eji mkpuchi anwụ mgbe niile, na-acha oji, na-ebu oke ibu, ma ọ bụ na-ama ihe na-eme Anyanwụ dị n'ihe ize ndụ maka vitamin D. - E gosipụtara 1 ijeri mmadụ n'ụwa niile nwere obere vitamin dị n'ọbara ha.
Ndị ọzọ nwere ike ghara inwe vitamin D gụnyere ndị na-etinye ụbọchị niile n'ime ụlọ, ndị bi na mpaghara nwere mmetọ dị elu, ndị nwere ọrịa na-adịghị ala ala, na ọrịa celiac. Kpọtụrụ dọkịta gị ka inyocha ogo vitamin D gị ma ọ bụrụ na ị na-echegbu na ị naghị ezu. Ogologo nke vitamin D erughị ≤20 ng / ml ma ọ dabara nke ọma na ịchọrọ ka ogo gị karịa 30.
Mmeju nwere ike ịdị mkpa na ụfọdụ mmadụ ma enwere ike inye ya yana calcium maka ahụike ọkpụkpụ n'ihi na a na-eji calcium wuo ọkpụkpụ na vitamin D iji nweta calcium nke ọma. Nri a tụrụ aro maka ọgwụ mmezi vitamin D bụ 600 IU ma ọ bụ 15 mcg maka ndị okenye ma na-eme ka nri elu ya dị elu na 4000 IU / ụbọchị, ọzọ maka ndị okenye. 4000 IU bụ oke elu nchekwa dị ka Institute of Medicine (IOM) si dị.
Yabụ na ị gaghị ewepụtakwu oge ọzọ n’ebughị ụzọ gakwuru dọkịta gị. Buru n'uche na ọgwụ gị nwere ike ịdị iche ma ọ bụrụ na dọkịta gị kwadoro ka ejiri osteoporosis ma ọ bụ ahụike ọzọ. Na mkpokọta, vitamin D dị mkpa na ahụike anyị dịka ọ na-eme ka ọkpụkpụ anyị sie ike ma na-enyere anyị aka ịmịkọrọ calcium nke ọma, nke na-enye anyị ohere ime ka akwara anyị nwee ahụ ike ma na-agagharị otu ha kwesiri.
Ọ na - enyerekwa akwara anyị aka iburu ozi n’etiti ụbụrụ na akụkụ ahụ ndị ọzọ. Akụkụ na-adọrọ mmasị bụ ịmụ ọrụ nke vitamin D na ọrịa ụfọdụ na-efe efe nke ị nwere ike ịnụ. Ọ ga-amasị m ịtụle nke a na nkọwa ndị dị n'okpuru.
Enwere m olileanya na isiokwu a kpochapụrụ ụfọdụ okwu vitamin D ma baara gị uru. Mee ka m mara ahụmịhe gị na Vitamin D, ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị naghị ezu ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko hapụ ha n'okpuru ma m ga-aza ha niile maka gị, kwa, Ọ pụtara ọtụtụ ihe nye gị dị anya, ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu ahụ, dịka ma denye aha, yana dịka mgbe niile ruo na-esote.
Afọ IU nke vitamin D ọ dị mma?
Yolọ Ọgwụ Mayo na-atụ aro ka ndị toro eto nweta RDA nke 600IU. Otú ọ dị, 1,000 ka2,000 IUkwa ụbọchị nkevitamin D.si a emeju bụ n'ozuzunchebe, kwesịrị inyere ndị mmadụ aka inweta ogo ọbara zuru okevitamin D., ma nwee ike ịnwe uru ahụike ọzọ.04.25.2017
Nwere ike vitamin D emetụta ụra?
Inweta Ya Late na inbọchị MeeNa-emetụta Sra
Njikọ njikọvitamin D.etoju na-hie ụraogo. N'ezie, ọtụtụ ọmụmụ jikọtara ọkwa dị alavitamin D.n'ime ọbara gị ka ọ dị elu karịahie ụraọgba aghara, daa ogbenyehie ụramma ma belatahie ụraoge (9, 10, 11).Ọkt 23 2018
Ọ dị mma ị vitaminụ vitamin D kwa ụbọchị?
Ntuziaka ugbu a na-ekwu na ndị okenye ekwesịghịnaraihe kariri 100 microgram kwa ubochi. Mavitamin D.bụ 'abụba-soluble'vitamin, ya mere, ahụ gị nwere ike ịchekwa ya ruo ọtụtụ ọnwa ị chọghị yakwa ụbọchị. Nke ahụ pụtara na ị nwekwara ike n'enweghị nsogbunaraihe mgbakwunye microgram 20 n’ụbọchị ma ọ bụ 500 microgram otu ugboro n’ọnwa.Sep 19 2018
Kedu nri ndị kachasị enweta vitamin D?
1. Salmon Salmon bu azu amara mara nma na isi iyi nke vitamin D.). Ma salmọn ahụ ọhia ma ọ bụ ọrụ ugbo nwere ike ime nnukwu ọdịiche. Ná nkezi, salmon jidere anụ ọhịa na-agbakọta 988 IU nke vitamin D kwa 3.5-ounce (100-gram) na-eje ozi, ma ọ bụ 124% nke DV. Somefọdụ ọmụmụ achọpụtawo ọbụna ọkwa dị elu na salmon ọhịa - ihe ruru 1,300 IU kwa otu (6).
Ebee ka nri vitamin D dum si bia?
Uwa zuru oke Nri Vitamin D bu uzuzu emere site na ero toro n'okpuru USDA Ezi oru ugbo na oru oma. Usoro mmeputara nke enyere ikike Earthlight iji nyefee 1000 μg (40,000 IU) nke Vitamin D kwa gram - kwupụtara n'onwe ya.
Kedu ụdị mgbakwunye dị na Ahịa Ahịa Nri?
Ihe mgbakwunye anyị gụnyere multivitamins, probiotics, protein powders na ndị ọzọ. Ma ị na-eme enyi-enyi, soro nri nri ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịkwalite usoro ahụike gị, anyị nwere mgbakwunye maka ụdị ndụ ọ bụla. Naanị maka ndị isi na họrọ koodu ZIP.